नेकपाको सरकार हिटलरी फाँसीवादको नेपाली संस्करण « Khabarhub
नेकपाको सरकार हिटलरी फाँसीवादको नेपाली संस्करण
२७ जेठ २०७६, सोमबार
भनिन्छ नेपालमा यतिबेला कम्युनिस्टको दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार छ । यसलाई वामपन्थीहरूको सरकार छ पनि भनिएको छ ।
हो , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । र भनिन्छ उनकै नेतृत्वमा बलियो अर्थात् दुई बहुमतको जननिर्वाचित सरकार छ । यसले समाजवाद उन्मुख बाटो लिएको छ । देशको चौतर्फी बिकास गर्ने मुलुकको समृद्धि नै यसको लक्ष्य हो भनिएको छ । यो सरकारले साढे एक वर्ष पार गरि सक्यो । र, यो कम्युनिस्टहरूको ज्यादै बलियो सरकार हो यसलाई पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन सक्तैन भनिएको छ ।
हो , यसलाई बाहिरबाट हेर्दा कम्युनिस्टहरूकै सरकार हो , वामपन्थीहरूकै सरकार हो , अन्यथा भन्न मिल्दैन र सुहाउँदैन पनि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । किनभने यो ओली नेतृत्वको सरकार पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट ( एमाले ) र पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) बीच एकता भएर बनेको कम्युनिस्टहरूको भारी बहुमतले बनेको दुई तिहाइको एकदमै बलियो सरकार हो भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
ओली नेतृत्वको डब्बल नेकपाको सरकार राजनीतिक हिसावले दलाल सरकार हो । अझै स्पष्ट पार्नु पर्दा यो सरकार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग एवम् सामन्त वर्गको नेतृत्व गर्ने दलाल सरकार हो
किन भने सोझो आँखाले हेर्दा त्यस्तै नै देखिन्छ । किनकि पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) यसो हेर्दा खेरी पार्टीको नाम पनि डब्बल कम्युनिस्ट पार्टी । कार्यालयको नाम पनि कम्युनिस्ट पार्टी कै राखिएको छ । तलमाथि सबै कार्यालयहरुमा कम्युनिस्ट पार्टीकै झण्डाहरु फहराइएका छन् ।
हरठाउँमा हेर्दाखेरी यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार बाहेक अर्को सरकार रै होइन भन्ने देखिन्छ । किनकि बुर्जुवा दक्षिणपन्थी पार्टी नेपाली कांग्रेस सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको रुपमा रहेको छ र उसले बारम्बार चर्को स्वरले ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारले बहुमतको आडमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाद्न खोज्यो भनेर चिल्याइरहेको छ ।
यो सरकारले आफूलाई कम्युनिस्टको सरकार भएको र समाजवाद उन्मुख रहेको दावी गर्दै पनि आएको छ । यी सब भनाइ र गराई तथा सुनाइहरुलाई मध्नजरले हेर्ने हो भने ओली नेतृत्वको सरकार कम्युनिस्ट सरकार नै हो , वामपन्थीहरूकै सरकार हो भन्ने जस्तो लाग्दछ ।
वर्तमान ओली नेतृत्वको डब्बल नेकपाको सरकार कम्युनिस्ट सरकार पनि होइन, वामपन्थीहरूको सरकार पनि होइन, त्यसो भए सरकार के हो त यो भन्ने प्रश्न खडा हुन आउँछ । प्रस्ट कुरा के हो भने यो ओली नेतृत्वको डब्बल नेकपाको सरकार राजनीतिक हिसावले दलाल सरकार हो । अझै स्पष्ट पार्नु पर्दा यो सरकार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग एवम् सामन्त वर्गको नेतृत्व गर्ने दलाल सरकार हो ।
चारित्रिक हिसावले ओली नेतृत्वको वामपन्थी भनाइएको यो सरकार सामाजिक फासीवादी सरकार हो । हिटलरी फासीवादको नेपाली संस्करण सरकार हो । सामाजिक फासीवादी भन्नुको मतलव नामले कम्युनिस्ट सरकार, कामले क्रान्तिकारीहरुमाथि दमन गर्ने भएकाले यो सामाजिक फासीवादी सरकार हो ।
एउटा हातमा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा फहराउँदै हिड्ने र अर्को हातमा बन्दुक बोकेर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुमाथि बन्दुक चलाउने सरकारलाई सामाजिक फासीवादी सरकार भनिन्छ । अहिले यो सरकारले त्यही हर्कत गरिरहेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर श्वयत आतंक मच्चाएर क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई तर्साउनु यसको जिउँदो प्रमाण हो ।
वर्तमान सत्तारूढ डब्बल नेकपा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद तथा नवसंशोधनवादको बाटो हुदै प्रतिक्रियावादमा पतन भइसकेको शक्ति हो । यसको कुनै वर्ग छैन । किनभने संशोधनवाद भनेको अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना हो । यसको मुख्य स्रोत पुँजीवाद हो । तर संशोधनवादीहरुको कुनै वर्ग हुदैन । किनकि उसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई परित्याग गरिसके हुन्छ ।
कम्युनिस्टहरू भनेका सर्वहारा वर्गका प्रतिनिधि हुन्छन् र उनिहरु कम्युनिस्ट पार्टीमा संगठित भएका हुन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरुले जनताको मुक्तिको नेतृत्व गरेका हुन्छन् । उनीहरूसंग जनता हुन्छ र जनताको साथ र सहयोगमा क्रान्तिको कामलाई अगाडि बढाउछन् । र क्रान्तिको नेतृत्व गर्दछन् ।
यो नाम मात्रको कम्युनिस्ट पार्टी हो । कामले बुर्जुवाहरुको पार्टी हो । यो नक्कली कम्युनिस्ट हो । अर्थात् नामधारी कम्युनिस्ट हो । यो संग कुनै वर्ग छैन । यसको कुनै वर्ग आधार छैन
क्रान्तिका लागि निश्चित देश र भूभागको आवश्यकता पर्दछ कम्युनिस्टहरूलाई। कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय हुँदाहुँदै पनि क्रान्ति त निश्चित निश्चित देशहरूमा सम्पन्न गर्दै अन्तिममा विश्वक्रान्ति गर्नु पर्ने भएकोले पहिले आफू बसेकै देशमा क्रान्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो भएर पहिलो नम्बरमा कम्युनिस्टहरू देशभक्त तथा जनवादी हुने गर्दछन् । देशभक्त तथा जनवादी चरित्र नभएकाहरु कम्युनिस्ट त के वामपन्थी सम्म पनि हुन सक्तैनन् ।
वर्तमान ओली नेतृत्वको डब्बल नेकपा माथि नै विष्लेशन गरिएको छ , यो नाम मात्रको कम्युनिस्ट पार्टी हो । कामले बुर्जुवाहरुको पार्टी हो । यो नक्कली कम्युनिस्ट हो । अर्थात् नामधारी कम्युनिस्ट हो । यो संग कुनै वर्ग छैन । यसको कुनै वर्ग आधार छैन ।
डब्बल नेकपा राजनीतिक रुपले दलालको रुपमा परिणत भइसकेको छ । सामाजिक रुपले तेस्रो लिङ्गीका रुपमा परिणत भइसकेको छ भने जीवशास्त्रीय रुपले ठिमाह प्रजातिका रुपमा परिणत भइसकेको छ । आर्थिक रुपले भ्रष्टिकरणका रुपमा परिणत भइसकेको छ । साँस्कृतिक रुपले पथभ्रष्ट कुरुप बनिसकेको छ ।
तसर्थ सत्तारूढ डब्बल नेकपाले जनतालाई कम्युनिस्ट भएको भन्दै झुक्याई रहेको छ । जनतालाई ढाँटिरहेको रहेको छ । जनतालाई झुक्याएर गत निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ ।
त्यसैले डब्बल नेकपा भित्र वर्ग उत्थान भइरहेको छ । सत्तामा जसरी तसरी बसिरहने । दरपुस्ता धान्ने सम्पत्ति राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने काममा व्यस्त छन् । यी सबै कारणले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल द्वयले नेतृत्व गरेको सत्तारूढ डब्बल नेकपा कम्युनिस्ट नभएकाले उनीहरूले नेतृत्व गरेको सरकार कम्युनिस्टहरूको सरकार हुने कुरै भएन । यसलाई सबैले यही रुपमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । माकर्सवादी द्वन्द्ववाखका आधारमा यसलाई यही ढंगले विश्लेषण तथा संसलेषण गर्न आवश्यक हुन्छ । र ओली नेतृत्वको सरकार कम्युनिस्टहरूको सरकार नभएर भनाइएको कम्युनिस्ट सरकार हो । अर्थात् भन्न लगाइएको नक्कली एवम् नामधारी कम्युनिस्ट सरकार हो ।
जहाँसम्म मुलुकको वर्तमान अवस्थाको प्रश्न हो , मुलुक अत्यन्तै अन्योल अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । मुलुकको अवस्थ अत्यन्तै चिन्ताजनक बन्न पुगेको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको ब्यवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्न पुगेको छ । नागरिकहरुको जिउधनको सुरक्षा बिक्राल बनिरहेको छ । बलतकार र हत्या – हिंसाका घटनाहरु घटिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारले मुलुकलाई संसारभर दुर्गंन्धित तुल्याइएको छ । सरकारको यही रबैयाका कारण पश्चगामी तत्वहरुले शीर उठाउने मौका पाउदै छन् ।
महंगिले नेपाली जनताको ढाड सेकिरहेको छ ।सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा उल्टै काला बजारियाहरु , कमिशनखोरहरु र बिचौलियाहरुको संरक्षण गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
शैक्षिक माफियाहरु , भूमाफियाहरु, मानव तस्करहरुको बिकविकी बढिरहेको छ । सरकारले यसको नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उनीहरूको संरक्षण गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
रोजगारीको समस्या बिक्राल बनिरहेको छ ।लाखौंको युवा शक्ति विदेश पलायन भैरहेको छ । गाउँ घरहरु युवा विहिन बन्न पुगेको अवस्था छ । र मुलुक रेमिटेन्सले चलिरहेको छ भनेर सत्ताधारिहरु गर्भ गरेर हिडिरहेका छन् ।
जनताको गाँस,बाँस र कपासको अवस्था नाजुक बन्न गएको छ । यो दलाल सरकारले जेठ १५ गते २०७६को आ. व. को बजेट संघीय संसदमा जुन पेस गरिएको छ , त्यो विगतमा कांग्रेसले पेस गरेको बजेट भन्दा कुनै फरक छैन । सांसदहरुलाई ६ करोड दिएर अरु भ्रष्ट गराइदै छ ।
भ्रष्ट र नालायक सरकारका व्यक्तिहरुको बढी आलोचना भैरहेकोले यो दलाल सरकारले सञ्चार माध्यमहरुमा अंकुश लगाउदै छ ।
मुलुकले तेस्रो जनआन्दोलनको माग गरिरहेको छ ।अब मुलुकमा तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प छैन ।
कम्युनिस्टहरूको बदनाम गरिरहेको यो सरकारले देश चलाउन सक्तैन । आपसि सत्ता भागबणडामा रुमलिन पुगिसकेको यो नेपाली समाजको ठिमाह सरकारले देशलाई उभो लगाउन संभव छैन ।
प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०७६, सोमबार ८ : ३१ बजे